ဖြိုး အလ်ဝိုင်: မေးခွန်းလေး ဆယ်ခုတည်းပါ စာရေးသူကိုယ်တိုင် နိဗ္ဗာန်ကို စိတ်ဝင်းစားနေတယ် (ဘယ်ညာအပါး ငါးရာဆိုလို့ပါ)
မေးခွန်းလေး ဆယ်ခုတည်းပါ စာရေးသူကိုယ်တိုင် နိဗ္ဗာန်ကို စိတ်ဝင်းစားနေတယ် (ဘယ်ညာအပါး ငါးရာဆိုလို့ပါ)
အင်း ဘလော့ဂ်ကို ကြည့်လို့ ကွန်မန့်ဒ်များ ဘယ်လိုအဖြေတွေများ ရှိမလဲ...အောက်မေ့တယ် ဒီပြင့်ဘာသာတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေလာမေးတယ် ဆဲတယ်ဗျာ မွန်းထူနေတာပဲ.... ဆဲတာကလည်း သိတဲ့အတိုင်း အစုံပေါ့ဗျာ.. မဆဲဘဲ ဆွေးနွေးချင်းကြတဲ့ သူတွေတော့ ရှိတယ်ဗျာ.. ဒါပေမဲ့ ကျတော်ကတော့ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်ကနေပဲ ဆွေးနွေးမယ်ဗျာ... ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့မှာ အဖြေရှိရင် ပေးကြပါ..သက်ဆိုင်ရာ ပို့စ်တွေအောက်မှာ ရေးပေးကြပါ... ယနေ့ကြွရောက်လာ ဓမ္မပရိသတ်များခင်ဗျာ(လူအထင်ကြီးမဲ့ လေသံမျိုးပေါ့ဗျာ) ကြည့်ကြပါ....
ကျတော်မေးထားတာကို ဖြေထားတဲ့အရာတွေက အကျိုးအကြောင်းမညီ မလိုလားအပ်သော ဒီ့ပြင်ဘာသာရဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျတော်ဖြေလည်း မဖြေနိူင်ဘူး ဖြေလည်းမဖြေတတ်ဘူး.. သူ့မေးခွန်းက ကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တာ ကျတော့်အလုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးဖို့သက်သက်ပဲ .... ဒါကြောင့် မဆိုင်တာကို မပြောပါနဲ့ ဆိုင်တာလေးတွေ ဖြေရှင်းပေးကြပါ.. ခင်ဗျားတို့က တကယ်ရီဖို့ကောင်းတယ် အနာပေါ်တုတ်ကျလို့ ထအော်နေတယ်လို့ပဲ စာရေးသူ သတ်မှတ်တယ်.. ကျတော်ယုံတယ် မဆဲဘဲ ကွန့်မန်ပေးတာ ရိုးရိုးသာမန်လူဖြစ်ဖို့များတယ်..... ဆဲပြီး ကွန်မန်းပေးတာ ဂတုံးဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့များတယ်.. ဘုန်းကြီးတွေ အဆဲသန်ကြောင်းကို စာရေးသူကောင်းကောင်းသိတယ်....ပါးစပ်ရှိရင် လူတိုင်းဆဲတတ်တယ်တဲ့ အယ်..လာသေးတယ်.... သူများက ပါးစပ်ရှိတယ် မဆဲကြဘူး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းကြတယ်.....
ခင်ဗျားတို့က ပါးစပ်ရှိတယ် ဆဲကြတယ်....ဆဲလားမဆဲလား ကွန်မန်းတွေကို လိုက်ဖျက်ရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်..နောက်ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်တော့မယ်.. ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဒီပြင်ဘာသာဝင်တွေ ဘာသာမဲ့တွေ ပိုပြီး အထင်သေး လက်တွေကျကျဆဲထားတာကို သိရတာပေါ့...... ဆဲလို့သာ တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေ စာရေးသူ ဒီဘလော့ဂ်တောင် လုပ်မနေတော့ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာကို နာမည်တပ်ပြီး တနေကုန်ထိုင်ဆဲလိုက်တယ်....ဒါကြောင့် ဆဲဆိုခြင်းဟာ လူအထင်သေးခံရရုံမှ တပါး ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မ၇ှိဘူးဗျာ(ဂေါတာမသွန်သင်ခြင်းမဟုတ် ကျတော်(ကိုယ်တော်ချော) သွန်သင်နေခြင်းပါ ) စာရေးသူလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး... စာရေးသူကို ကားတိုက်လို့ ဆေးရုံတင်ထားတယ်လို့ သတင်းက လွှင့်သေးတယ်ဗျာ.. စာရေးသူဖတ်ပြီး သဘောကျမိတယ်... စိတ်ထဲမှတ်နော်... စားတာကို စားနေတယ်လို့မှတ် စွန့်နေတာကို စွန့်နေတယ်လို့မှတ်...မှားယွင်းနေတာကို မှားယွင်းနေတယ်လို့မှတ်ပြီး မငြင်းခုံ မဆဲဆိုဘဲ လက်ခံလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ....အားလုံးပဲ ဘာသာမဲ့ ခံယူလိုက်ကြ၇အောင်လားဗျာ.... တကယ်လက်တွေ့မကျသော ဘာသာတခုကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်နေသည်ထက် ဘာဘာသာကိုမှ မယုံကြည်မကိုးကွယ်မူက ပို၍ ကောင်းပါလိမ့်မယ်.... ဒီပြင်ဘာသာတွေ လက်တွေ့ကျလား မကျလားဆိုတာတော့ စာရေးသူလည်း မဖြေရှင်းတတ်ဘူး သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်များနဲ့ ဆွေးနွေးကြပါ.... ကျိန်းသေပေါက် စာရေးသူပြောနိူင်တာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လုံးဝလက်တွေ့မကျလို့ အလိမ်အညာဇာတ်လမ်းများဟာ တကယ်များတာဗျာ... အဆိုတော်အငဲကတော့ ကိုးဂဏန်းနဲ့ နာမည်ကြီးတယ် စာရေးသူကတော့ ၂၀၁၀ မှာ မေးခွန်းလေး (၁၀)ခုကို မေးချင်ပါတယ်..
အခုဒီမေးခွန်းလေးကို အားလုံဲးပဲ သိသလောက် ၀ိုင်းဖြေပေးကြပါ.... အခြားဘာသာဝင်များ ဘာသာမဲ့များလည်း ၀င်ရောက်ကြည့်ရူနေကြမပဲ။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ မဆဲဘဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိသလောက် အဖြေပေးကြပါ။ ဒီနေရာမှ ခင်ဗျားတို့ဘာသာကို လူအထင်ကြီး လေးစားလာအောင်လည်း လုပ်နိူင်သလို လူအထင်သေး အမြင်သေးအောင် လုပ်နိူင်ပါတယ်...ဒါတွေအားလုံးဟာ ခင်ဗျားတို့ အပေါ်မှာဘဲ မူတည်တယ်....
(၂)နိဗ္ဗာန်ကို ဘယ်သူဖန်တီးထားတာလဲ (သို့) ဘယ်သူဖန်ဆင်းထားတာလဲ..(ကျိန်းသေတာတော့ နိဗ္ဗာန်ကို ဂေါတာမကိုယ်တိုင် ဆောက်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ် တဦးတယောက်ဆိုလျှင်လဲ သူ၏အမည်ကို ဖော်ပြပေးပါ)
(၄)မိန်းမငါးယောက်ယူထားတဲ့သူ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလား????(ဥပမာ ဂေါတမလိုလူမျိုးပေါ့)
(၅) အရက်သမား နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလား???? (ဘာလို့လဲဆို မြန်မာပြည်မှာ အရက်သမားတကယ်များတာ သူတို့အတွက် စာနာထောက်ထားပြီး မေးခွန်းမေးပေးတာပါ)
(၆)ရောက်နိူင်မယ်ဆိုရင်လဲ လူသတ်သမား/မိန်းမအများကြီးယူသော်သူ/အရက်သမား က မည်ကဲ့သို့ ခံယူချက်ကို မွေးပြီး အကျင့်သီလကိုစောင့်ထိန်းပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလဲ????
(၈)နိဗ္ဗာန်နှင့် နတ်ပြည်၏ ကွာခြားချက်ကို ဖော် ပြပေးပါ.... နတ်ပြည်ကိုရောက်လျှင် နတ်သမီးဘယ်ညာ အပါးငါးရာယောက်ဖြင့် နေရမည်ဆိုတာ တကယ်လား လေရွှီးထားတာလား????
(နတ်သမီးဘယ်ညာ အပါးငါးရာဆိုလျှင် စာရေးသူ စိတ်ဝင်းစားမ်ိတယ် အပါးငါးရာ မလိုပါဘူး ဟိုဘက်ငါးယောက်ဒီဘက်ငါးယောက်ဆိုရင် တော်ပါပြီ ဟီဟီ)
(၉)မိန်းမမယူဘဲ သင်္ကန်းခြုံပြီး ဖာချနေသော ဘုန်းကြီးများ ဖာမချဘဲ ကိလေသာကို မိမိစိတ်ဖြင့် မိမိလက်ဖြင့် ပြုလုပ်နေသော ဘုန်းကြီးများ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်ပါသလား????
(၁၀)မိသားစုရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုသာ ဂရုစိုက်ပြီး တောမထွက် အိမ်၌ပင် တနေ့တနာရီစာမျှ ကမ္မာဌာန်းရူတဲ့လူများကော နိဗ္ဗာန်ရောက်နိူင်မလား???(သို့) နိဗ္ဗာန်မရောက် နောက်ဘ၀ရောက်မယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်ဘ၀ကို ရောက်နိူင်မလဲ?????
မေးခွန်းများတော့ အများကြီးဘဲ တကယ်လက်တွေ့ကျတာတွေ
ထည့်ကါ အကောင်းဆုံးကို ရွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်.... အားလုံးပဲ ရန်မဖြစ်ကြေးနော်....မဆဲကြေးနော်....ဒေါသမထွက်ကြေးနော်....